Indlela yokufumana iakhawunti yobungcali kwi-Instagram Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Meyi 6, 2021 0 IiCententarios 371
Ukunyusa imbuyekezo yeshishini lakho kunokwenzeka ngeenethiwekhi zentlalo, kwaye i-Instagram ayikho ngaphandle komgaqo. Ngabasebenzisi bayo abangaphezulu kwe-1000 yezigidi ezihambelana nayo, ukusebenzisa eli qonga njengesixhobo sokuthengisa kuya kukunceda ukuba utyhalele oko unokukufikelela kunye nenkampani yakho ukuya kumda.
Uninzi lweempawu ezaziwayo zamasebe ahlukeneyo akhoyo zisebenzisa i-Instagram ukukhuthaza iimveliso zazo. Eminye yemizekelo ebalaseleyo zizithuba zikaGoogle kunye neemveliso zefashoni.
Ngokusebenzisa iprofayili yobungcali kwi-Instagram uya kuba nakho ukwenza ubukho obubalulekileyo kwiwebhu, ngomxholo wokuqala kunye nokunxibelelana noluntu lwakho kunye nokwandisa ukubonakala kwakho, ngokuthi yalatha ukuba iakhawunti yakho okanye iimveliso zakho zalathisiwe kwiinjini yokukhangela.
Ukuba neakhawunti yobungcali kwi-Instagram, yenza oku kulandelayo:
Yenza iakhawunti kwi-Instagram okanye ungene usebenzisa igama lomsebenzisi kunye negama lokugqitha ukuba sele uneprofayile. Ungangena nedatha oyisebenzisa kuFacebook.
Beka kwiprofayili yakho i-icon enemigca emithathu ethe tye, kwikona ephezulu ngasekunene kwi-akhawunti yakho.
Faka icandelo "Useto". Xa ungena kweli candelo, uza kubona icandelo "le-akhawunti", oya kuthi xa ucofa kulo, likunike ithuba "lokutshintsha uye kwiakhawunti yobungcali".
Emva koko kuya kufuneka uqhagamshele iakhawunti yakho ye-Instagram yobungcali kwiakhawunti yeFacebook yobungcali. Kuya kufuneka wenze iakhawunti yobungcali ye-Facebook ngaphambi kokwenza iakhawunti yakho ye-Instagram yobungcali.
Okulandelayo, kuya kufuneka uqwalasele iakhawunti yakho yobungcali ngeyakho igama lomsebenzisi kunye negama lokugqitha.
Iimpawu zeprofayili yobungcali ye-Instagram
Into yokuqala oza kuyibona kwiprofayili yakho liqhosha lokunxibelelana kwiprofayili, kunye namaqhosha akho "Biza isenzo".
Uya kubona kwakhona ukubandakanya udidi lwenkampani yakho. Unokongeza idilesi yewebhu yeshishini lakho. Ngokukwanjalo, unokukhetha ukubeka i-geolocation, kwimeko apho unendawo ebonakalayo.
Ewe unokwenza iintengiso zentengiso kwinkampani yakho. Kwelinye icala, kuyakubakho ukubakho kokuvavanywa kokusebenza kweakhawunti yakho ngokwezibalo.
Ezinye iinkcukacha oza kuzifumana kwi-Instagram yobungcali
Ezinye izalathiso ezinikwa lolu hlobo lweprofayile, ixesha loqhagamshelo kunye nesini sayo. Inani lokunxibelelana neempapasho zakho, inani lotyelelo kwiprofayili yakho, inani lamaxesha abacofe ngalo kwidilesi yewebhu yeshishini lakho, inani lamaxesha abaye babelana ngalo ngokupapashwa kwakho, phakathi kwabanye.
Iinkcukacha-manani zakho zeprofayile ziya kufumaneka nge icon ethe tyaba emgceni weprofayile yakho. Emva kokungena, uya kubona i "Statistics" icon kwenye yeenketho eziya kuboniswa kwithebhu.
Izixhobo zolawulo lwe-Instagram
Njengazo zonke iinethiwekhi zentlalo, kwi-Instagram ungasebenzisa ezinye izicelo ezikunceda ukulawula iiakhawunti zakho. Phakathi kwazo sinokukhankanya iPanoply okanye iHootsuite.
Isixhobo ngasinye sinendlela yaso yokusebenza kwaye siya kukunika imisebenzi emininzi ukuze ukwazi ukulawula umxholo owunikayo ngeakhawunti yakho ye-Instagram yobuchwephesha ngokwembono yomhlaba wonke.
1 Ukuba neakhawunti yobungcali kwi-Instagram, yenza oku kulandelayo:
2 Iimpawu zeprofayili yobungcali ye-Instagram
3 Ezinye iinkcukacha oza kuzifumana kwi-Instagram yobungcali
4 Izixhobo zolawulo lwe-Instagram
Uyixela njani ividiyo kwi-YouTube?